CSS @ teny gasy II
Noho ny fanontanian'i Kdaombaramita (tatsy) momba ny fanovàna ny templetany ao amin'ny blaoginy (izay tsy mitovy *.css amin'ny ahy sy ry news2dago), dia ireto indray no tokony hataony :
1-Jereo ny fisie *.css ampiasain'ilay blaogy. Izany hoe : Midira ao @ "pejy fototr'(page source) ilay blaoginao. Karokarohy etsy amin'ny "barre des menus" Arakaraky ny navigateranao (internet explorer, mozilla, opera, na netscape sns...) ny misy azy io. Raha Mozilla Firefox moa no ampiasainao dia toy ity ny toerana misy azy io :
Rehefa misokatra izany dia karohy ilay fisie *.css ampiasain'ny blaoginao. tsindrio ny Ctrl+F, ary soraty ny hoe .css dia alefaso ny fikarohana. Ho hitanao ao moa ilay fisie .css ampiasain'ny blaoginao, ary koa ny toerana misy izany eto amin'ny aterineto. Raha ny blaogin'i Kdaombaramita no anaovana an'ireo dia hita fa ny "http://kdaombaramita.blaogy.com/templates/connections/style.css" no ampiasain'ny blaoginy :
2- Ataovy dika-petaka io adiresy io (http://kdaombaramita.blaogy.com/templates/connections/style.css) ary sokafy ao amin'ny navigateranao : toy ity.
3- Karohy izay tampleta tianao hovainao ao. Marihina fa ny "templeta" iray dia manomboka amin'ny songasasaka (sharp, dièse, #), arahin'ny anaran'ny "id", ary ireo toetoetrany rehetra voafono anaty fonosam-be (accolade). Ohatra ireto :
4-Ataovy ny fanovàna ny toetoetran'ny templeta (proprietés du template) izay tianao hovaina : raha tian'i Kdaombaramita hovaina ohatra 'zao ilay sary "ria-drano" ao amin'ny blaoginy dia mila soloiny ho adiresina sary hafa ilay "img/top.jpg" etsy ambony. Izany sary izany moa dia tokony hirefy 760px x 183px mba hampipoitra azy. Raha ity sary ity* 'zao no tiana hasolo izany dia ity ny kaody ampidirina ao amin'ny toerana "fanovàna css" -n'ny blaogy :
) no-repeat bottom;
Dia toy izany hatrany. Marihina fa tsy ny sary ihany no toetoetra afaka ovaina fa ny halehibe (dimensions), ny toerany (position), ny loko fanambaniny raha misy, ny toetoetran'ny soratra, raha misy soratra ao, ets.
Dia izay ;). Tsy mora ny manazava an'ilay izy moa ny tenanay koa tsy dia hoe mahay be, ka dia mety tsy hazava. Ity resako ity moa dia natao ho an'ny olona tena mbola tsy mahay mihitsy a :). Aza iomehezana raha efa tsisy dikany aminao . Tsy natao ho an'ny oebmestra akory hihihi
*:sary notsiponiko teto amin'ny aterineto io fa tsy ahy a . Hitako ho mirefy 760px - 183px dia notsiponiko hihihi.